Sidee ayey u samaysmaan Sunaamis maxaana inala gudboon? | Saadaasha Shabakadda
Waxaan maqalnay tsunamis marar badan. Kuwani waa hirarka dhul gariirka ee ay sababaan taxane mowjado waaweyn oo ka dhasha dhulgariir hoostiisa. Sidoo kale waa la abuuri karaa iyadoo uu ka dhacayo dhul gariir, Fulkaanaha ama meteorite.
Waxaan aragnay raadadka halista ah iyo waxyeelada ay keeni karto marka Sunaamigu dhaco. Ma garan karnaa sida ay u samaysan yihiin iyo waxa la sameeyo haddii ay dhacdo digniinta tsunami?
1 Sidee tsunami u samaysmaa
2 Maxaa la sameeyaa haddii ay dhacdo tsunami?
Sidee tsunami u samaysmaa
Xeebta, hirarka tsunami waxay dherer ahaan noqon karaan kumayaal kun oo kiilomitir oo si siman u kala fog Sidoo kale, badda dhexdeeda, hirarku waxay u socon karaan sida ugu dhakhsaha badan diyaaradda, oo gaareysa 600 mayl saacaddii (ku dhowaad kun kiilomitir saacaddiiba) iyo, markay gaaraan xeebta, abuur mowjado ka badan 30 mitir.
Mawjadaha Tsunami ma weynaanayaan illaa ay ka soo dhowaadaan xeebta. Sababtaas awgeed, maraakiibta ka shaqeeya badaha dhaadheer ma arki karaan tsunamis, maaddaama hirarka si dirqi ah u sareeyaan.
In kasta oo tsunamis-yada oo dhami aysan waxyeello gaarsiin, haddana dhammaantood waa kuwo khatar badan, maaddaama mowjadda ka bilaabata 12 inji hirarka uu soo saaray dhulgariirka biyaha hoostooda waxay noqon karaan 100 fuudh oo dherer ah waxay kusii fidayaan dhinac walba marki ay xeebta gaaraanna dherer bay helayaan.
Markuu dhulgariirku dhaco, intee in le'eg ayay ku qaadataa in mowjaduhu ay soo gaadhaan xeebta? Hagaag tani waxay kuxirantahay nooca tsunami. Waxaa jira laba nooc:
Kan hore, waxa loogu yeero "maxalliga ah" ama "agagaarka xarunta" oo ay abuuri karaan dhulgariirro ka dhaca agagaarka oo ay ku qaadato inay daqiiqado kooban ku gaaraan xeebta.
Nooca labaad ee tsunami waa "xudun fog" waxaana sababa dhulgariir boqolaal mayl ka fog lagana yaabo inuu qaado laga bilaabo saddex illaa 22 saacadood si loo gaaro aagagga xeebta.
Maxaa la sameeyaa haddii ay dhacdo tsunami?
Si loo aqoonsado jiritaanka tsunami waa inaad siisaa calaamadahaas:
Xeebta waxaad ku arki kartaa sida xariiqii xeebta ayaa guray.
Haddii aad ku sugan tahay xeebta oo aad dareento dhulgariir daba dheeraaday ama awood u leh xasiloonida dadka, waxaad ogtahay in tsunami uu dhici doono.
Dareen guux weyn oo badda ka imanaya
Markii astaamahan la bixiyo, waa inaad tagtaa gudaha, aad ka tagtaa xeebta oo aad u fuushaa sida ugu sareysa ee suuragalka ah ee joogga sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Sidee ayey u samaysmaan Sunaamis maxaana inala gudboon?
Macluumaad aad u xiiso badan ayaa daadanaya macluumaadka iyo wixii ka sarreeya xaqiiqda qallafsan ee waxa ka dhacaya kuleylka adduunka, iyo in dad badani aysan ogeyn khatarta weyn ee halista ugu jirta jiritaanka nolosha dhulka.
Ku jawaab walter Gallo